Bogga ugu weyn » Freebies » Dheeraadka Dheeriga ah: Ka dalbashada Khatartaada Dhalinta ee Keto
Marka jirkaagu ku jiro ketosis, wuxuu gubanayaa unugyada dufanka tamarta halkii ay ka ahaan lahaayeen carbs. Iyada oo la adeegsanayo Keto Body Tone, waad ka caawin kartaa kadhigida hawshan!
Xitaa warar ka fiican yo .waxaad heli kartaa dhalo Keto ah iskuna day RISK BILAASH AH !!!
Keto Bodytone waa kaalmo dheellitiran oo awood leh oo ketosis ah oo ka caawin doona miisaanka luminta, ka caawiyo inuu gubo xayawaanka caloosha, iyo taageerid dheefshiidka iyo hurdada. Waa kuwan adiga oo khibrad u leh gunnadan Keto:
Waxaad Ku Gali Doontaa Ketosis Fast!
Waxaad Gubeysaa Baruurta Tamarta Adigoon Khibrad uhelin Jitters
oo Adiguna Xisaabtama Muruqa Caatada!
Fadlan Xusuusnow: Dalabkan dhalada Keto ee bilaa halista ah wuxuu ansax noqonayaa oo keliya haddii aad ku sugan tahay Mareykanka & Kanada.
Haddii aad ku sugan tahay caalami ahaan ka hubi halistan halista ah ee dhalada keto bixiya